Aqoonkaab baro-10-caado-maskaxdaada iyo garaadkaaga dhaawici kara | Aqoonkaab
baro-10-caado-maskaxdaada iyo garaadkaaga dhaawici kara
Jul 30, 2015Caafimaadka
Maskaxdu waa goobta ugu muhimsan jidhkeena rabi inagu galaday meesha isku dubarida dhamaan hawlaha jidhka iyo fikirada wanaagsan .waxa muhima inaad barato waxyaabaha hoos udhigikara heerkii shaqo ee maskaxda.luminaayana firfircoonideedi. Shabakada Aqoonkaab waxay akhristayaasheeda la wadaagaysaa 10 caado oo khatar ku ah maskaxdada kuwan oo ay daaha ka qaaday haayada Caafimaadka dunida ee WHO .
Dadka aan subaxdii quraacandi waxaa dhigooda ku yaraadA sonkorta .tan oo sababaysa inay maskaxdu heliwaydo sonkor ay ku shaqayso.
2.Cunada xad dhaafa .wax kastaaba xad bay leeyihiin .hadaad isticmaasho xadi badan oo cunta ah mid jidhkaagu aanu ubaanhayn waxay sababi kartaa in ay adkadaan xididadii maskaxda halbowlayashii dhiiga uso qaadaayay .taso qofka u horseedaysa inay hoos udhacdo awoodi maskaxdu
3.Sigaarka .cabida siigaarku waxay keentaa unugyadii maskaxdu inay yaradaan Ugu danbayn ay noqoto xanuunka AlZheimer Disease.
4.xadi badan oo sonkara inaad isticmaasho.sonkorta badani waxay khalkhal galisaa nuugidii cunada iyo nafaqadii cuntada ugu danbayn waxay sababtaa .nafaqo daro iyado saamayn ku yeelata hurumarkii maskaxda.
5.hawo wasaqaysan.Maskaxdu waa xubinta jidhka ugu isticmaalkabadan Oxygen ama hawada .Inaad qaadato hawo wasakhaysan waxay yaraysaa helidii Hawo nadiif ah inay hesho maskaxdu .Waxay hoos udhigaysaa shaqadii maskaxda
6.Hurda yari.maskaxdu waa meesha shaqada ugu culus qabata jidhka sidaaso yay tahay hadana waa goob ubaahan nasiino .Hadaanay helin waqtiyo ay ku nasatana waxa imankara in uu hoos udhac ku yimaado heerkeedi fikar .
7.Inaad madaxa duubto xigidaad huridid.intaad hurudo hadaad madaxaga huwiso maro ama buste waxaa kordhaaya xadigii Waskhada Carbon Dioxide.waxaaba yaraanaaya oxyegentii maskaxdu isticmaali lahayd Tano dhaawac wayn ukeeni karta maskaxdaada .
8.Inaad maskaxda ku shaqayso adigo xanuunsanaaya .inaad shaqo adag qabato ama waxdhigato adigo xanuunsanaaya waxaa badanaa dhici karta inay yaraato firfircoonidi maskaxdadu ugu danbayn iyo inuu maskaxdaada dhaawac wayn ku keeno
9.Inaad dhiiri galinwaydo fikirada wanaagsan ee maskaxdaadu hal abuurto .Fakarku waa shayga ugu wacan e maskaxda lagu tababarikaro .inaad qaadan waydo fikirka wanaagsan ee kugu so dhacaa waxay keenaysaa qaybti maskaxdaada fikirka uqaabilsanayd inay dhimato .
10.hadal yari .wada sheekaysiga caqliga iyo cimliga ku dhisani wuxuu kor uqadaa inay maskaxdu si wanaagsan ugudato hawsheedi shaqo
Bilaal Ahmed Cige
Previous Postmarie Curie Hal-adayg aan hungoobin Next Post10 ka luuqadood ee dunida dadka uGu badani ku hadlaan
One thought on “baro-10-caado-maskaxdaada iyo garaadkaaga dhaawici kara”
Hamdi jirdeh October 16, 2016 at 3:36 pm